Hanolotra seho miavaka eto andrenivohitra - Herbert Léonard - Madagascar Informations
10 décembre 2015 11 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Fampisehoana 2 no ho atolotry Herbert Léonad ny mpankafy androany faha 10 ny volana Déc etsy amin’ny Hotel Carlton Anosy izay hanomboka amin’ny 7 ora sy sasany hariva ankoatra ny etsy amin’ny lapany kolon-tsaina sy ny fanatanjahan-tena etsy Mahamasina ny faha 12 ny volana Dec izao.
Hira tsy afaka ambavany maro ny « Pour le plaisir , sy ny château valant » ary raha hiverenana dia ny taona 70 no tena nampalaza sy nahafantarana ny hiran’ity mpanakanto Frantsay ity.
Sambany teo amin’ny tantara no hanaovany fampisehoana goavana eto Madagasikara ary efa faniriany efa ela ny hanatanteraka izany saingy izao vao tontosa noho ny fiaraha miasa matotra teo aminy sy ny Media Consulting.
Haharitra ora iray mahery ny seho ho an’ny androany ary ho hiraina ao avokoa ireo hira nahafantarana azy hatramin’izay.
Efa tomombana avokoa ny fanomanana rehetra na ny mpitendry na ny vahiny nasaina , vonona hampiseho ny tsara indrindra any aminy i Herbert Léonard sy ny Media Consulting ka ny mpankafy sisa no andrasana.
Efa azo jifaina etsy amin’ny super music Analakely ny tapakiLa ankoatra ny eny amin’ny foibeny Media Consulting Ankorondrano ,IFM Analakely ,, Carlton Anosy ary Jumbo Score Ankorondrano.
Ny vidim-pidirana ihany koa natao ho zakany fahefa mividiny malagasy.
Ho feno ny fandaharam-potonany Herbert Léonard mandritra izao fandalovany eto Madagasikara izao amin’ny alalany fizahan-tany ary anisany tena mahaliana azy ny hijery Bobab.
← Hanohy ny asany ny ben’ny tananan’Ambohidratrimo
Climat de Madagascar →
26 décembre 2018 Madagascar Informations 0